ရှီက ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းအတွက် အထူးသီးသန့် မူပိုင်ခွင့်မဟုတ်ဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းအတွက် အထူးသီးသန့်မူပိုင်ခွင့်မဟုတ်ကြောင်း ၊ သို့သော် နိုင်ငံအားလုံး၏ ပြည်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပိုင်ခွင့် တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ ဗီဒီယိုရုပ်သံဖြင့် ပေးပို့သော ရှီ၏ မိန့်ခွန်း၌ ငြိမ်းချမ်း၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသည် လူသားမျိုးနွယ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကို လက်ခံသင့်ကြောင်း နှင့် ခေတ်မီတိုးတက်မှုအတွက် မတူခြားနားသော နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်အောင် စီမံဖန်တီးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
BEIJING, Sept. 21 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said on Tuesday that democracy is notaspecial right reserved to an individual country, butaright for the people of all countries to enjoy.
A world of peace and development should embrace civilizations of various forms, and must accommodate diverse paths to modernization, Xi said in his statement delivered via video at the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly. Enditem